PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2019-01-06 - I-NSFAS ishintshe indlela yokuxhumana nezitshudeni
I-NSFAS ishintshe indlela yokuxhumana nezitshudeni
ISIKHWAMA esixhasa izitshudeni ngemali yokufunda ezikhungweni zemfundo ephakeme iNational Student Financial Aid Scheme (NSFAS) ngeke sisaxhumana nabafuna uxhaso ngemiqhafazo noma ngama-email njengoba kukhona abeba imininingwane yezitshudeni.
Abalesi sikhwama bathi ukwanda kwezehlakalo zokwebiwa kwemininingwane yezitshudeni, yikhona okwenze ukuthi kungabe kusaxhunywana nazo nge-email noma ngomqhafazo.
Okhulumela lesi sikhwama, uMnuz Kagisho Mamabolo, uthe kulo nyaka ngeke besaxhumana nabafundi ngale ndlela. Uthe sebezosebenzisa i-myNSFAS Online Self-Service Portal ukuze babone ukuthi bayaxhaswa yini. Bangashayela ne-call centre yalesi sikhwama okubhusende ukuyishayela. Uqhube wathi akudingeki i-data ukuze ungene kwi-website yalesi sikhwama ubheke ukuthi uxhasiwe noma awuxhaswanga.
“Emasontweni amabili edlule abafake izicelo okokuqala nalabo abebexhasiwe kukhona abebethumela ama-emails nemiqhafazo bezenza abantu abasebenza kwiNSFAS. Bebefuna imininingwane eyimfihlo yezitshudeni nalabo abafake izicelo zoxhaso,” kusho uMamabolo.
Uthe le mininingwane abebeyithumela ibiyakhiwe ngendlela yokuthi icishe ifane nethunyelwe yiNSFAS.
“Laba abebethumela le miyalezo bebesuke befuna labo abafake izicelo ukuthi balethe imininingwane yamaaccount abo. Siyabaxwayisa abafake izicelo nabazali ukuthi baqaphele laba abaqolayo ikakhulukazi uma into ithinta imininingane eyimfihlo efana neye-account. Asisayithumeli i-SMS noma i-email uma kukhona okuthunyelwayo kuzobe kungaqhamuki kwiNSFAS.”
Uthe ziyanda lezi zehlakalo zabafuna ukuqola abantu ngenxa yesibalo esiphezulu sezicelo kulo nyaka. “Siyakugcizelela ukuthi ngeke sifune ulwazi oluyimfihlo olufana ne-password, pin, One Time Password (OTP) nemininingwane ye-account ngefoni noma nge-email.
Ezinye zezinto sizozithumela kwiwebsite yeNSFAS ethi:www.nsfas.org.za noma kwikhasi likatwitter elithi: @ynsfas.”
Uthe bayayiphenya indaba yalo mkhonyovu. Uveze ukuthi labo abaxhasiwe kuzophinde kuxhunywane nabo kusetshenziswa abezindaba kanjalo nezikhungo abafunda kuzona.